Maqaal: Hogaamiye u dhibtooda sidii ay dadkiisu u dhergi lahaayeen iyo mid ku dherga dhibka dadkiisa...!!! (Aqri sheekadan cajiibka ah)
SICIID BINU CAAMIR AL JUMAXI wuxuu ahaa saxaabi ku caan baxay daacadimo iyo ALLA ka cabsi xilligii khilaafadii CUMAR BINU KHADAAB ayaa loo magacaabay inuu BARASAAB ka noqdo HOMS (XUMS) oo maanta ka mid ah magaalooyinka waawayn ee SUURIYA.
Maalin baa Cumar booqasho ku kala bixiyay aagaas deeto dadkii baa lasoo kulmiyay oo lagu yiri: ‘’Soo gudbiya wixii cabasho ah oo aad ka qabtaan SICIID’’ Dadkii waxay yiraahdeen ‘’4 baa noogu daran”:
1- Siciid shaqada wuu kasoo daahaa subaxdii.
2- Habeenkii lama helo xitaa hadii guriga lagu garaaco.
3- Bishii mar baa waxaa dhacda inuusan subixii shaqada imanin.
4- Tan ugu dambeeysa ee aan uga cabaneeyno waa inuu mar mar iska suuxo.
Siciid Binu Caamir baa la yiri ka war celiyoo wuxuu yiri:
1- Subaxadii waan soo daahaa waayo ma haysto lacag aan adeegayaal ku qabsado oo faqri baan ahay sidaa darteed marka aan dukado oo aan Qur’aan aqriyo waxaan bilaabaa inaan xaaskayga shaqada ka caawiyo.
2- Sababta aan habeenkii la ii helaynin waa anigoo ku mashquulsan CIBAADO iyo ALLA bari maadaama aan maalintii aduunyo ku mashquul sanahay.
3- Sababta aan bishiiba mar usoo daahaa waxay tahay anigoo maalintaa dhaqda halka KHAMIIS ee SOKADA ah ee aan hayso dabeeto marka uu galabtii ii QALLALO ayaan imaadaa xafiiska.
4- Sababta aan mar mar u miir daboolmo waxay tahay waxaan goob jog u ahaa ciqaabtii iyo jirdilkii loo gaystey KHUBEEYB BIN CADIY oo la isu barbar dhigay inuu doorto naftiisa iyo maalkiisa oo badbaada iyo NABI MUXAMED (NNKH) wuuna diiday inuu ka noqdo IIMAANKIISA si xun oo xaraar baana loo dilay.
Siciid oo markaa gaal ahaa dabcan waxba axsaan ah umuu sameeynin Khubeeyb lkn wixii ka dambeeyey markii uu islaamay marka uu xasuustaba wuu suuxi jirey.
CUMAR ayaa markii uu hadalkii dhameeyey Siciid wuxuu yiri: ‘’ILAAH baa mahadsan, fikradii aan Siciid ka qabayna waxay noqotay sidaan filayay qofkii Siciid ka cabanayayna isagoon waxan oo dhan ogeeyn RAALI GELIN baa ku waajibtey.
Waxaa kaloo la sheegay in Cumar uu dadkii uu Siciid waalliga u ahaa uu ku yiri soo qora dadka FUQARADA ah si loo caawiyo deeto waxaa taxi ama liiskii soo galay SICIID BINU CAAMIR AL JUMAXII laftiisa……..Ogoowna waa barasaabkii waana ninka dhan oo gacanta ku haya FURAHA BAYTUL MAALKA…….ALLOOW ALLE.
Waxaan sheekadaan usoo ergeystey maanta waxa JAGO loogu ordaa aad ka JISCIMATID oo aad wax ka heshid ee aad dad wax u qabatid XIL looma qabto……Siciidka sidaa u taxadirayana LIGHT YEARS ayuu dhan kasta uga wanaagsanaa kuwa maanta.
Waxaa Diyaariyay: Maxamed Xaaji Xuseen Raage